Eyona Portugal - Casa Vista - I-Airbnb
Eyona Portugal - Casa Vista
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRiki
IMonte São Miguel yindawo yokuphumla phakathi kwezityalo nezilwanyana ezidlamkileyo. Yonke into iveza ubulula (nokuba bubutyebi) bobomi belizwe.
Eli gumbi lokulala libini linika indawo yabantu ababini kwaye linayo yonke intuthuzelo efunekayo.
Isitovu sokhuni sinika ubushushu obutofotofo ngeentsuku ezibandayo. Emva kwekhitshi kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini. Ukusuka apha umntu ungena kwigumbi lokuhlambela, elineshawa, indlu yangasese, isitya sokuhlambela. Kwiindwendwe iitawuli ezintsha kunye nelinen yebhedi ikhona.
Le ndlu ikwi-Alentejo, ummandla wasePortugal apho ixesha libonakala limile. Ukusuka kwindlu, ukuhamba okude kunokwenziwa. Ukuhamba ukuya elalini sele kumnandi. Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka uhamba kulwandle olungazange lubekho ngaphambili lweentyatyambo. Ngamabhodlo namaqula ashiyiweyo.
Ichibi elihle laseBarragem De Santa Clara likumgama wemizuzu eli-15. Yindawo entle yosuku lokuqubha kunye nokuloba.
Kumgama oziikhilomitha ezingama-45 ukuya kwiilwandle ezinesanti zePaki yeSizwe yaseVicentina.
Umbuki zindwendwe ngu- Riki
Indawo ekuyo indlu ithetha ukuba unendawo yabucala eninzi. Ndihlala ndingekho kwaye ungaphazanyiswa ukonwabele ukuthula. Ngemibuzo kunye neengxaki, kukho umnakekeli othetha kakuhle isiPhuthukezi, isiDatshi, isiJamani kunye nesiNgesi. Unako kwakhona ukukhathalela ukubonelela ngokutya kwiminqweno yakho kunye nezithintelo zokutya. € 14,- pp kwikhosi ye-3 yokutya.
Indawo ekuyo indlu ithetha ukuba unendawo yabucala eninzi. Ndihlala ndingekho kwaye ungaphazanyiswa ukonwabele ukuthula. Ngemibuzo kunye neengxaki, kukho umnakekeli othetha kakuhle…
Inombolo yomthetho: 61070/AL